KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Dhibaatada loo geesto Haweenka Barakacayaasha ah & Carruurtooda (Warbixin)
Wednesday 28 March 2012 15:10
Dhibaatada loo geesto Haweenka Barakacayaasha ah & Carruurtooda (Warbixin)
Muqdisho (Keydmedia) - Tan iyo markii Abaarta ay ku dhufatay qeybo ka tirsan Gobolada Koonfureed ee Dalka Soomaaliya ayaa waxaa magaalada Muqdisho ay marti gelisay kumanaan Qoys oo ay Xoolahii iyo Dalagoodii Beeraha ku waayay Abaarata.
Qoysaskan barakacayaasha ah kuwa isku daran oo ay isagu jiraan dad da’a ah Haween iyo Carruur ayaa waxa ay ku noolyihiin Xeryo kala duwan oo ku yaalla Gudaha iyo Daafaha Muqdisho, iyadoo Maalinba Maalinta ka dambaysa ay Noloshooda si wiiqayso kadib markii inta badan dadkii iyo Hay’adihii wax siinayay ay joojiyeen wixii ay siin jireen.
Barakacayasha ayaa billaabay inay daboolaan Nolal maalmeedkooda, iyagoo dhexgalay dadka si ay u helaan Shaqooyin Muruqmaal ah sida in Dharka ay u dhaqaan dadka, inay Kabaha dadka u baalishaan iyo inay dharka ku feereeyaan Guryaha dhexdooda.
Waxaad arkaysaa markaad marayso Wadooyinka waawayn ee Magaaladda Muqdisho Carruur yar yar oo darbiyada Goobaha Ganacsiga ah dadka Kabaha ugu Baalisahaya (Baalisha) halka kuwa kalena ay Baabuurta ku Dhaqayaan.
Carruurtan ayaa waxaad ka dareemaysa Dhibaatada xilligan soo foodsaartay, iyadoo markaad waraysato ay ku sheegaayaan in Maalinba maalinta ka dambaysa xaaladoodu ay tahay mid kasoo daraysa.
Wiil yar oo 12-sano jir ah kana mid ah Carruurta Kabaha ku baalisha Isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho sidoo kalena kamid ah Carruurta ay dhaleen barakacayaasha ayaa u sheegay Keydmedia in marar qaar loo diido lacagta, isagoo intaasi ku daray in sidoo kale mararka qaar laga xoogo dhamaan wixii ay maalintaasi shaqaysteen.
Hooyooyinka ayaa iyaguna Subixii waxa ay galaan Xaafadaha kala duwan ee magalaada Muqdisho, iyagoo raadinaya Dad ay Dharka u dhaqaan ama ay u qabtaan howlaha Guriyaha ee kala duwan.
Qaar ka tirsan Haweenka ayaa la kulmay markii ay Muqdisho yimaadeen Tacaddiyo kala duwan, waxaana Tacaddiyadaasi u badnaa Kufsi, iyadoo weliba ay Goob-joog ka ahaayeen Raggooda.
"Aniga waxaa i kufsaday 3 Bilood kahor 3 Niman oo wateen Dharka Ciidamada ..." Sidaas waxaa tiri Gabar Soomaaliyeed oo 20 Sano jir ah oo la hadashay Wariyaha Keydmedia ee Muqdisho.
Markaan weydiinay iney arintaas ka hadashay oo ey Dacwootay waxey tiri "Ilaa Maantay Qof aan kala hadlay arintaas ma jirto, adigaa u horeysid Qof aan kala hadlo..." Ayadoo oyneysa ayee hadalkeedi sii wadatay "Yaa kala hadlaa? Aabahey, Hooyadey, 4 Walaalahey ah waxey dhintay 4 Sano kahor... ii sheeg Yaa kala hadlaa, yaa i dhageysanaayo?"
”Waxaan kasoo baxay Gurigeeyga, waxana doontay inaan soo gurto Qoryo aan Ciyaalka dab ugu shido, anigoo meel duur ah maraya waxaa iga hor yimid Askari Soomaali ah oo isla marki ..." Sidaas waxaa u sheegtay Keydmedia Nasro.
Reportka oo Dhameystiran Halkaan ka Aqriso
Ma jirto ilaa iyo hada cid xil iska saartay sugida Amaanka Xerayaha ay ku Noolyihiin dadka Barakacayaasha ah iyo weliba xanaanaynta Carruurtooda.